Ewebata WordPress Image Rotator Wijetị | Blog MarTech
DK New Media nwere nke a WordPress ngwa mgbakwunye na azụ-burner ruo oge ụfọdụ. Ọchịchọ maka ngwa mgbakwunye ihe oyiyi dị mfe, nke na-agbanwe dị elu abụghị naanị maka ndị ahịa anyị, kamakwa obodo WordPress. Ihe mgbakwunye ndị ahụ achọtara m nke kwere nkwa ime ihe anyị chọrọ bụ ndị agbajiri ma ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ ọ bụla. Ya mere, anyị mere nke anyị.
Ibudata ma ọ bụ Wụnye ihe oyiyi Rotator Wijetị
Versiondị nke mbụ ahụ jọrọ njọ, yabụ etinyeghị ya na WordPress Plugin Repository. Ọ bụghị naanị ịkọwa okwu: ị nwere ike ịme naanị otu oge na ibe ọ bụla, e nwere ebe abụọ dị iche iche a ga-ahazi ntọala, ekwuru m na ọ dị njọ?
Onye na-agbagharị agbagharị na-abịa na ntụgharị atọ: Linear, Loop, and Fade. Linear ga-ehichapụ ihe oyiyi ahụ na ntanetị na ntanetị. Ozugbo usoro ntụgharị na-erute na njedebe nke onyogho ndị a, ọ ga-ilaghachi azụ wee pịgharịa n'ụzọ nke ọzọ. Loop rotators bụ okirikiri: mgbe e mechara onyinyo ikpeazụ, onyonyo izizi na ndepụta ahụ ga - apụta ọzọ, akaghị ga - amalite. Fjụ oyi ga-agwụ onye ọ bụla oyiyi na na onye ọ bụla ihe oyiyi si.
Ntughari ndia abughi nsogbu anyi. Ọ bụ ntọala. Nke ahụ bụ akụkụ jọrọ njọ, mana oge a anyị mere ihe mara mma. Anyị maara na usoro ịgbakwunye ihe oyiyi na rotator kwesịrị ịdị mfe. Igodo larịị “+” ga-akpọku mkparịta ụka nke WordPress. Site n'ebe ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ bulite onyonyo ọhụụ, ma ọ bụ họrọ onyonyo ebugoro na Media Library ha, dịka ha ga-eme ma ọ bụrụ na ha na-etinye ihe oyiyi na post. Mgbe ihe oyiyi ahụ mechara bulite ma ọ bụ onye ọrụ ahọrọla ihe oyiyi, ha ga-pịa bọtịnụ "Zigara Foto Rotator". Ozugbo ebugo ihe oyiyi niile achọrọ, ha dị mfe njikwa.
Hovering ihe oyiyi aha ga-egosipụta a tooltip na e dere ihe oyiyi. Anyị achọghị imebi ntọala wijetị, yabụ anyị kpebiri na itinye ihe oyiyi niile n'ime akpa ntọala abụghị nhọrọ. Mkpebi anyị itinye ihe oyiyi n'ime a tooltip preview akwụ abụọ-anọghị n'ogige atụrụ: ọrụ na-adịghị na-eche ihe oyiyi Ibu Ibu tupu nwere ike idezi, reorder, wdg…; ọ na-emekwa ka interface anyị dị ọcha, nke na-eme ka nhazi na nhichapụ dị mfe.
Sorting dị mfe dị ka ịpị ohere efu n'ime ihe ndepụta ihe oyiyi ma dọrọ ya gaa n'ọnọdụ achọrọ. Cheedị ụdị ihe ọ ga-abụrịrị na anyị gaara etinye ihe oyiyi ahụ (ha niile dị iche iche) ozugbo n'ime akpa ntọala.
Iji hichapụ ihe oyiyi si wijetị, pịa bọtịnụ “-” nke dị n’akụkụ ihe oyiyi ịchọrọ iwepụ. Buru n'uche na ị ga-pịa "Chekwa" ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime mgbanwe ndị a ga-ewere ọnọdụ.
Ọ bụrụ na ị nye ngwa mgbakwunye a ọsọ, biko nweere onwe gị ịhapụ okwu ọ bụla, chinchi, ma ọ bụ nzaghachi na Nkwado WordPress forums(anyị nyochaa ndị a) ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ anyị ozugbo.
Tags: DK New MediaImageFoto RotatorIhe mmịfe onyonyopluginRotatorSliderWijetịWordPresswordpress pluginNgwaọrụ WordPress
Dee 14, 2011 na 10: 41 AM
Kedu ka esere ihe oyiyi si arụ ọrụ? Achọpụtara m na igbe igbe na-ekwu 200 × 200. Gịnị ma ọ bụrụ na ihe oyiyi m dị iche iche?
Dee 15, 2011 na 1: 10 AM
Echere m na nke ahụ ga-agbakwunye ụzọ mgbagwoju anya na ngwa mgbakwunye a. Ma ọ gaghị ele anya nke ọma n'ihi na ha nwere ike ọ gaghị etinye isi nke ọma na ntanetị, enwere ike iwepụ ya, wdg.
Dec 14, 2011 na 6:06 PM
DIfferent obosara otosịrị iru ga-arụ ọrụ, Otú ọ dị elu otosịrị iru agaghị. Dị ka ọ dị ugbu a, iji nweta ihe kacha mma na wijetị, ị kwesịrị ịme ihe oyiyi niile ị na-eme atụmatụ iji otu ogo ahụ.
Na ntọhapụ ọzọ m ga-agbakwunye ntọala akụkụ wijetị. Ga-enwe ike ịhọrọ obosara na ịdị elu nke wijetị niile, n'ihi ya kwa, a ga-agbanwe ihe oyiyi ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Dee 15, 2011 na 1: 08 AM
@coleydotco: ọrụ ịtụnanya dị na nke a #WordPress #Plugin. M hụrụ ya n'anya!
Jenụwarị 5, 2012 na 3:04 PM
Enwere ma ọ bụ ga-abụ ụzọ iji jikọta onyonyo na peeji ọdịda ụfọdụ mgbe ịpịrị?
Jenụwarị 5, 2012 na 6:09 PM
Ma, ma, Bethany… ma anyị na-eme atụmatụ tụgharịa na dị ka a atụmatụ na-esonụ ntọhapụ!
Sep 4, 2012 na 10: 24 AM
@BethanyBey: disqus ngwa mgbakwunye ka emelitere iji tinye njikọ ahụ!
Mee 21, 2013 na 2: 34 PM
Anyị mekwara mgbanwe ụfọdụ na ya n'izu a iji dozie ụfọdụ nsogbu njikọ. @BethanyBey: onyinye
Hụ nke a n'anya - ga - eji ya eme ihe mgbe ọ nwere njikọta ma ị nwere ike ịgbanwe oge mgbanwe. ezigbo ndị ọrụ - ekele
Feb 13, 2012 n’elekere 4:41 nke abali
Achọrọ m iji ngwa mgbakwunye a, mana mgbe m buliri onyonyo, enweghị m 'iziga onyonyo na wijetị wijetị', ọ bụ naanị 'ihe ntinye iji tinye'.
Emechara m ehichapụ ma tinyegharịa ngwa mgbakwunye ahụ, mana ọ nweghị ọdịmma. Biko ị nwere ike ịnyere m aka?
M tinye nseta ihuenyo, ma ọ bụrụ na ọ bụ na Dutch ị kwesịrị inwe ike ịhụ na bọtịnụ 'zipụ ihe oyiyi…' na-efu. M ga-enwe ekele dị ukwuu maka enyemaka gị.
Feb 13, 2012 n’elekere 10:29 nke abali
Enwere m ike ịkọ na ọ ga-achọ ka anyị wuo faịlụ ntụgharị. Nwere ike ịgwa anyị ihe "zigara onyonyo ka wijetị wijetị" dị na Dutch? Anyị na-adịghị na-eme atụmatụ a tọhapụ anya, ma ga-agbalị ileghara a.
Feb 13, 2012 n’elekere 10:47 nke abali
I meela nke ukwuu maka azịza gị ọsọ ọsọ. Nkọwa ziri ezi ga - abụ 'invoegen in wiji rotator wijetị'.
Enwere m olileanya na nke a na-arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, agaghị m eche banyere iji 'izipu onyonyo na wijetị rotator' na Bekee ma ọ bụrụ na nke ahụ ga-edozi nsogbu ahụ.
Feb 13, 2012 na 2:40 PM
Enwere m ọtụtụ saịtị WP na-agba ọsọ, n'ihi ya agbalịrị m ihe oyiyi a na ntụgharị na nsụgharị Bekee, ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma. Yabụ, echere m na ị bụ eziokwu, nke a nwere na ntụgharị asụsụ. Ọ ga-amagbu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-agagharị na-ewu ntụgharị asụsụ ahụ ebe na nso nso. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka m tụgharịa asụsụ Bekee na Dutch, obi ga-atọ m ụtọ inye aka.
Ajụjụ ọzọ: enwere ụzọ iji pịa foto iji mee ka ọ nọrọ, ka ndị mmadụ wee gụọ ederede m gbakwunyere? Ma ọ bụ na akaghị, mee ka ọ belata ngwa ngwa?
A na-ebudata ugbu a na aha aha! Ihe omume anyi n’abia bu ihu ma anyi enweghi ike inweta ihe njigide ihe site n’aka igwe oba akwukwo nke ihe di ka ihe etinye.
Ngwaọrụ a dị mma ma dị mfe ma nhọrọ ị gbakwunye njikọ na onyonyo ga-adị mma. Enyochare m ụfọdụ okwu okenye wee chọpụta na ndị ọrụ ole na ole rịọrọ ọnwa 3 gara aga. Olileanya na ị ga-enwe ike iwekota ya n'oge na-adịghị.
Anyị ga-esi ebe ahụ!
Dec 30, 2013 na 12:26 PM
Amaghị nke ọma ma ọ bụrụ na ị chọpụtara na agbakwunyere nke a.
Mee 7, 2012 na 12: 55 PM
Maka ebumnuche ụfọdụ, enwere agwa dị n’akụkụ onyonyo ahụ. Ma ọ bụghị ya ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Sep 4, 2012 na 10: 23 AM
Nke ahụ emezie @ google-71556138c8611ea275e4be4f3e34b930: disqus!
Hey niile! Anyị emelitela ngwa mgbakwunye iji tinye njikọ njikọ!
Ọkt 23, 2012 na 3:29 PM
M hụrụ n'anya ngwa mgbakwunye na ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka m. Ajuju m nwere, enwere uzo iji mepee uzo ohuru na windo ohuru?
Ọkt 23, 2012 na 6:20 PM
Na nwute, ọ naghị adị ka ibe mgbasa ozi mgbasa ozi nwere atụmatụ ahụ - anyị na-eji mkparịta ụka WordPress arụnyere. Anyị nwere ike ile anya na-eme ya nhọrọ na ngwa mgbakwunye, agbanyeghị! N'agbata ugbu a na mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume ime nke ahụ na jQuery ma ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe na-eme mmepe ahụ.
Ọkt 23, 2012 na 6:38 PM
Agbalịrị m ihe rụọ ọrụ na plugins ndị ọzọ, mana enweghị ihu ọma. Ohere ọ bụla i nwere ike ịgwa m ebe m ga-agbanwe mgbanwe ndị ahụ, yana etu esi eme ya?
Anyị nwere nhọrọ nhọrọ na wijetị wijetị ịhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ njikọ ahụ meghere na windo ọhụrụ.
Mee 21, 2013 na 2: 33 PM
@janetmorrow: disqus emelitere ngwa mgbakwunye nwere ikike imeghe njikọ na windo ọhụrụ. Jidere nsụgharị ọhụrụ!
kompas nke iru uju
Dec 24, 2013 na 9:47 PM
Daalụ maka nnukwu mgbakwunye. Otu ajụjụ - Enwere nhọrọ iji nwee ọnọdụ abụọ nke ngwa mgbakwunye? Ọ ga-amasị m iji otu ihe oyiyi otu ebe na otu ihe oyiyi na ebe ọzọ.
Dec 30, 2013 na 12:25 PM
Ahụghị m gịnị kpatara na - ị nyela ya ịnwale?
Dec 30, 2013 na 1:10 PM
Naanị emelitere na atụmatụ iji malite na oyiyi efu!